မာလိုင်းယွန်း (Merlion) လို့ခေါ်တဲ့ စင်တိုဆာကျွန်းပေါ်မှာ ရှိတဲ့ စင်ကာပူ အထိမ်းအမှတ် ရုပ်ထုကြီးဆီကို လတ်တလော အလည်ရောက် ဖြစ်ပါတယ်။ မာလိုင်းယွန်း ရုပ်ထုထဲကို ဝင်ရတာ တန်တယ်လို့ ထင်ရအောင် ရုပ်ထုထဲမှာ စင်ကာပူရဲ့ နောက်ခံ သမိုင်းကြောင်းနဲ့ မာလိုင်းယွန်းရဲ့ နောက်ကြောင်းရာဇဝင်ကို ရိုက်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ကို ပြပါတယ်။ မျက်စိနောက်အောင် သတိထားမိ တာကတော့ အဲဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာ ခြင်္သေ့ရော မာလိုင်းယွန်းပါ ပုံစံက ပြောင်စပ်စပ်နဲ့ပါ။ ခက်တာက ရုပ်ရှင်ကို ငြိမ်ငြိမ်ဆိတ်ဆိတ် မကြည့်နိုင်ပဲ စိတ်ထဲက တောင်တွေးမြောက်တွေး လျှောက်တွေးနေမိပါတယ်။
စန်းနီလာ အူတားမား လို့ ခေါ်တဲ့ မလေးမင်းသားဟာ တောလိုက်ထွက်ရင်း မလေးကျွန်းဆွယ် တစ်နေရာကနေ စင်ကာပူကျွန်း နေရာကို လှမ်းတွေ့တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီမှာ မှန်ပြောင်းမရှိဘဲ တွေ့တယ် ဆိုတော့ ဘယ်နေရာက ဖြစ်နိုင်သလဲ ဆိုပြီး တွေးကြည့်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ခြေကို တွေးကြည့်ရင်း စင်ကာပူနဲ့ အနီးဆုံး ဂျဟိုးပြည်နယ်ရဲ့ တစ်နေရာကနေ တွေ့တာ ဖြစ်မယ်လို့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ကောက်ချက်ဆွဲ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အတည်ပြု လိုက်ပါတယ်။
အဲဒါနဲ့ မင်းသားဟာ စင်ကာပူ ကျွန်းနေရာကို အဖော်အပေါင်း တစ်သိုက်နဲ့ လှေစီးပြီး ခရီးထွက် လာပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာတော့ အတော် အရစ်ရှည်တဲ့ မင်းသားပဲ လို့ မှတ်ချက်ပေး မိပါတယ်။ အကြောင်းရင်းကတော့ ဒီလိုပါ။ မလေးရှား ကုန်းမကြီးနဲ့ စင်ကာပူကျွန်း နှစ်ခုကြားက အနီးဆုံး နေရာတွေက သိပ်မဝေးလှပါဘူး။ အခု မလေးရှားနဲ့ စင်ကာပူကို ဆက်ထားတဲ့ ကော့စ်ဝေး တံတားနေရာ ဆိုရင် မိနစ် နှစ်ဆယ်လောက် လမ်းဖြတ်လျှောက်ရင် ရောက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် အင်မီဂရေးရှင်း အဆောက်အဦးအသစ် မဖွင့်ခင် အချိန်တုန်းက ဘတ်စ်ကား စောင့်ရတာ စိတ်မရှည်ရင် ဖြစ်ဖြစ်၊ ညသန်းခေါင်ကျော်လို့ ဘတ်စ်ကား မရှိတော့ရင် ဖြစ်ဖြစ် ခဏခဏ လမ်းဖြတ်လျှောက်ဖူး ပါတယ်။ ဝလုံးလို့ ခေါ်ကြတဲ့ အိုဗာစတေး တစ်ချို့ဆိုရင် မလေးရှားကနေ စင်ကာပူကို ရေကူးပြီးတောင် လာကြပါသေးတယ်။ အဲဒီလို နီးတဲ့ နေရာကနေ ပင်လယ်ကို မဖြတ်ဘဲ ဝေးတဲ့နေရာကနေ သွားဖြတ်လို့ ဒီမင်းသားကို အတော် အရစ်ရှည်တဲ့ မင်းသားလို့ မှတ်ချက်ချ မိတာပါ။
သွားရင်လာရင်း ပင်လယ်ထဲမှာ နဂါးနဲ့ တွေ့ပါတယ်။ တရုတ်လူမျိုးတွေ ပြောတဲ့ ပုံပြင်ဆိုတော့ နဂါးပါလာတာ အထူးအဆန်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဇာတ်လမ်းထဲမှာတော့ နဂါးကလည်းလာ လှိုင်းလေကလည်း ကြီးတော့ မင်းသားက သူ့ရဲ့ သရဖူကို ဖြုတ်ပြီး ပင်လယ် မင်းတရားကြီးကို လက်ဆောင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ လှိုင်းလေငြိမ်ပြီး နဂါးလည်း ပျောက်သွားပါတယ်။ အခုခေတ် စင်ကာပူမှာ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူဆိုတာ မရှိသလောက် ရှားပေမယ့် သမိုင်းကြောင်းမှာတော့ လာဘ်ထိုးတာ ပါတယ်ကွ လို့ ထပ်ပြီး မှတ်ချက်ပေးမိ ပြန်ပါတယ်။ အခုခေတ်အခါမှာ စင်ကာပူကို ဝင်ဖို့ အင်မီဂရေးရှင်းကို လာဘ်ထိုးရင်တော့ ချန်ဂီကို ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ချန်ဂီလေဆိပ်ကို ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ချန်ဂီ အကျဉ်းထောင်ကို ရည်ညွှန်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းကို ဆက်ပါဦးမယ်။ စင်ကာပူကျွန်းပေါ်ကို အရောက်မှာ မင်းသားနဲ့ ခြင်္သေ့ကြီးတစ်ကောင် တွေ့ပါတယ်။ ခြင်္သေ့က မင်းသားကို အစပိုင်းမှာ ဟောက်စား လုပ်ကြည့်ပေမယ့် မင်းသားနဲ့ ခြင်္သေ့ အကြည့်ချင်းဆုံပြီးတဲ့ နောက်မှာ သူတို့နှစ်ယောက် နားလည်မှု စာချွန်လွှာ လက်မှတ် မထိုးဘဲ နားလည်မှု ရသွားကြပါတယ်။ ဂုရုကွေးလို ဟိုက်ရှာလပတ်ရည် အော်ရမလိုပါပဲ။ စင်ကာပူ လေသံနဲ့ ဆိုရင်တော့ ဝါလားဝေး ပေါ့။ ခြင်္သေ့ကို တွေ့တဲ့အတွက် မလေး ဘာသာနဲ့ ဆင်းဂါးပူရ(ဆင်းဂါး = ခြင်္သေ့) + (ပူရ = မြို့တော်) လို့ နာမည်ပေး လိုက်တယ် ဆိုပါတယ်။ နောင်တစ်ချိန်မှာတော့ မင်းသားနဲ့ တွေ့ခဲ့တဲ့ နဂါးနဲ့ ခြင်္သေ့အတွက် အမှတ်တရအနေနဲ့ စင်ကာပူ အထိမ်းအမှတ် ရုပ်ထုကို ရေသတ္တဝါ ငါးနဲ့ ခြင်္သေ့ရုပ်ထု တို့ ဆက်ပြီး မာလိုင်းယွန်း (Mer= ပင်လယ်) + (Lion = ခြင်္သေ့) အနေနဲ့ သတ်မှတ်ခဲ့တယ် ဆိုပါတယ်။
အငြင်းပွားစရာတွေ စပါပြီ။ သမိုင်းပညာရှင်တွေက စင်ကာပူမှာ ခြင်္သေ့ရှိဖူးတယ် ဆိုတာကို လက်မခံပါဘူး။ အာရှနွယ်ဖွား ခြင်္သေ့တောင် စင်ကာပူမှာ မရှိနိုင်ဘူး လို့ ဆိုကြပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းကို သိတော့ အဲဒီခြင်္သေ့ဘယ်က ရောက်လာသလဲ စဉ်းစား ကြည့်ပါတယ်။ ကမ္ဘာမြေကြီးကို ဥက္ကာခဲကြီးနဲ့ တိုက်ပြီး ခြင်္သေ့များ စင်ကာပူမှ မျိုးတုံးပျောက်ကွယ် သွားတယ် လို့ ဆိုရအောင်လည်း စန်းနီလာ အူတားမား ခြင်္သေ့နဲ့ တွေ့ခဲ့တာ နှစ် ၇၀၀ လောက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ မာဒါဂတ်စကား ကာတွန်းကားထဲက ခြင်္သေ့ အဲလက်စ်လို ရေထဲမျောလာတယ် ဆိုရအောင်လည်း အဲဒီခေတ်က ခြင်္သေ့ကို တစ်နေရာက တစ်နေရာ သင်္ဘောနဲ့ သယ်ကြမယ် မထင်ပါဘူး။ အဲဒီတော့ သမိုင်းပညာရှင်တွေ ပြောသလို သူတွေ့ခဲ့တာ ခြင်္သေ့မဟုတ်ဘဲ မာလာယန်ကျား ဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတာကိုပဲ လက်ခံ ရပါတော့တယ်။
အဲဒီတော့ မလေးမင်းသား ခြင်္သေ့နဲ့ကျား မခွဲတတ်တာနဲ့ မြို့နာမည်ပါ လွဲသွားတယ် လို့ ဆိုရပါမယ်။ စန်းနီလာ အူတားမား သာ ကျားကို ကျားမှန်း သိခဲ့ရင် စင်ကာပူရ မဖြစ်ဘဲ ဟာရီမောပူရ ဖြစ်သွားမှာပါ။ မလေးဘာသာနဲ့ ကျားကို ဟာရီမော လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ နှစ်ကာလ ရွေ့လျားတော့ စင်ကာပူ မဟုတ်ပဲ ဟာရီမောပူ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ မြို့ကို နိမိတ်ပုံ သုံးတဲ့ နေရာမှာလည်း လိုင်းယွန်း စီးတီး မဖြစ်ဘဲ တိုင်းဂါးစီးတီး ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလိုပဲ စင်ကာပူရဲ့ အထိမ်းအမှတ်ဟာလည်း မာလိုင်းယွန်း မဖြစ်ဘဲ မာတိုင်းဂါးကြီးပဲ ဖြစ်နေမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ လည်း စင်ကာပူကို လာတယ် ဆိုရင် မြန်မာ ဘန်းစကားနဲ့ စလုံးသွားတယ် မပြောရဘဲ ငါတော့ ဟ သွားပြီ လို့ ပြောရမလား မသိပါဘူး။
(Image Credit to : wikimedia.org)
Posted by ZT at 1:33 AM
ဟား ဟား.. ရယ်ရတာဗျာ။ ဒါကြောင့် blog ပေါ်မှာ တွေ ့တွေ ့နေရတာ "စင်ကျားပူ" ဆိုတာ ခြင်္သေ့လဲ မဟုတ် ကျားလဲ မဖြစ်ချင်လို့အလယ်အလတ် သုံးနေတာ ထင်တယ်နော်။ ဟုတ်ရင် Give me five !!
ဟားဟား။ မဟုတ်ရပါဘူး။ စင်ကျားပို ဆိုတာ တရုတ်အသံထွက်ပါ။ But I give you five. :D
အခုမှပဲ စင်ကာပူရ ရဲ့ definition သိရတော့တယ်။
ရယ်ရတယ်တော့ .... တို့လဲ ဟမှာနေတာ ... မောလွန်းလို့ ပါးစပ်အမြဲ ဟ နေရတယ်တော့ ... ဟောဟဲ ... ဟောဟဲ ... စလုံးမှာ stress များတာကို ပြောတာပါ...
ငါတော့ ဟ သွားပြီ ....ဟာ... အဲလိုတော့ မပြောပါနဲ့
ha ha so funny....
အရင်က ကိုယ့်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ်တွေးမိတာ mer ဆိုတာ mermaid ကနေလာတာ၊ lion ကတော့ ခြသေ့င်္ပေါ့။ အဲတော့ merlion ဒီခြင်္သေ့က အမဖြစ်ရမယ် မဟုတ်ရင် အောက်ပိုင်းက အမ၊ အပေါ်ပိုင်းက အထီး ဖြစ်ရမယ်ပေါ့။
နောက်အတွေးတစ်ခုက စင်ဂပူရ ဆိုတာ ပါဠိလိုတောင် ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ စင်ဂ ဆိုတာ သီဟ(မြန်မာ) စင်းဂါး(ထိုင်း-ဘီယာနံမည်) နဲ့တူနေတယ်။ ပူရ ဆိုတာက ပါဠိလိုက တိုင်းပြည်ကိုး။
ကိုယ့်အတွေးနဲ့ ကိုယ်လေ... ဆင်ဒန်လား ပြောလိုက်မှ ကျွန်တော်တောင် မဟရဲတော့ဘူး :P
သမိုင်းမရှိလို့ သမိုင်းရှိချင်လို့ ထွင်ထားတာနေမှာပါ...
ဘုရား ဘုရား မြန်မာစကားလုံးတွေ တယ်ကြောက်စရာကောင်းပါလား...
P.Ti ကလည်း merlionကို အခြောက်ဇာတ်သွင်းနေပါလား.. း)
ကြိတ်ရယ်တာပဲ ။ အသံထွက်သွားပြီ ။ ဟား ဟား ။
စင်ဂပူရ ဆိုတာ ပါဠိဘာသာနဲ့ နာမည်ပေးထားတာပါ
ဟာ.. ရီလိုက်ရတာ မောပြီး ပူတောင်လာတယ်။ ဟာရီမောပူဆိုလို့ ပြောလိုက်တာ ဘာပူမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး။ ပူချင်တာသာ ပူပေတော့..:)
ဖတ်ပြီး ပြုံးမိပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ မလေးမင်းသား အသုံးမကျချက် ပေါ်သွားတာပေါ့။ အဟား...
haaa haaaa haaaa haaa............
I laughed out loud like that ;P
စင်ကျားပူ အသုံးလျော့မှပဲ ကြာရင် ကျားနဲ့ခြင်သေ့ကို မကွဲလို့ သုံးတယ်ထင်တဲ့လူ များလာနိုင်တယ်။
မလေး ဘာသာက ပါဠိနဲ့ ဆင်တာ ရှိပါတယ်။ လေယာဉ်စီးရင် တွေ့ရတတ်တဲ့ အထူးတန်း၊ ဘိဇိနက် ကလပ်စ်ကို သူတို့ ပထမကလပ် လို့ ပေါင်းပါတယ်။ (Patama Klass) မှားချင်မှားနိုင်သည်။
ဒါ့ကြောင့် အပေါ်က ပီတိ ပြောတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပါဠိကနေ သက်ဆင်းလာတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ နောက်ပြီး ပါဠိဆိုတာ စကားသာ ရှိပြီး စာမရှိတဲ့ ဘာသာပါ။ ဒါ့ကြောင့် မလေးတွေ ကိုယ်ပိုင်စာ မရှိတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒေါက်တာသန်းထွန်း ကောက်ချက်ဆွဲပြတာကတော့ သုဝဏ္ဏဘူမိ သထုံပြည်ဆိုတာ မွန်ပြည်နယ်ကလဲ မဟုတ်၊ ယိုးယားတွေ ပြောနေတဲ့ ဆူကိုထိုင်းနားကလဲ မဟုတ်ပဲ မလေးကျွန်းဆွယ်နားတစ်ဝိုက် ဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့ ကောက်ချက်အရ မလေးတွေဟာ ရှေးမဆွကတည်းက ပါဠိတွေလိုပဲ သုံးလာတာ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ကိုယ်တိုင် ကောက်ချက်ဆွဲပြီး ကိုယ်တိုင် အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။
ကျာနဲ့ ခြင်္သေ့မှားတာကတော့ ဖြစ်နိုင်ချေဟာ မင်းသားဆိုတော့ ပြင်ပ ဗဟုသုတကလဲ နည်း၊ အနားက ကပ်ဖားလျက်ဖားများသာ ရှိဆိုတော့ ခြေလေးချောင်းနဲ့ အစွယ်နဲ့ ကြောက်စရာကောင် ငါတွေ့ခဲ့တယ်။ ဘာလဲ ဆိုတော့ ဟိုက တွေ့ကရာ ပြောလိုက်တာ နေမှာပါ။ ခွေးလို့ မပြောလိုက်လို့ ခုလို လှလှပပ စင်းကျားပိုး ဆိုတဲ့ နာမည်လေး ရလာတာကို အနားက ကပ်ဖားလျက်ဖားများကို ကျေးဇူးတင်ရမလို ဖြစ်နေပါတယ်။
မာလိုင်းယွန်း ဆိုလို့ “မာ”ကျတော့ သူတို့ အခေါ်အဝေါ်နဲ့ ခေါ်ပြီး “လိုင်းယွန်း”ကျတော့ အင်္ဂလိပ်နာမည် တပ်ပုံထောက်တော့ ခြင်္သေ့မရှိဘူး မမြင်ဖူးဘူး.. ဒါ့ကြောင့် ခြင်္သေ့ကို သူတို့အခေါ် မရှိလောက်ဘူး ဆိုတာ တော်တော် သိသာတယ်။
အင်္ဂလိပ်-မလေး အဘိဓာန်မှာ ခြင်္သေ့ကို စင်းဂါး(singa) ကျားကို ဟာရီမော(harimau) လို့ ရေးထားပါတယ်။ :)
ဒီး လိုလဲ ဖြစ်နိုင်သဗျ
အဲ့မင်းသား နေကာ မျက်မှန်တွေပါတွေများတပ်သလားမသိ
ဒါပေမဲ့ ကပ်ဖားလျက်ဖား လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်
ပုံပြော တယ်ကောင်းတာပဲ။ အားရပါးရ ရယ်သွားပါတယ်။
“ဟ သွားပြီ” လို့ ပြောမနေရတာ မကျေနပ်သင့်ဘူးလား း)
လံကြုပ် ဇာတ်လမ်းပါလို့ သူတို့ နိုင်ငံသားတွေ ကိုယ်တိုင်က ပြောခဲ့တာ ကြားဖူးပါတယ်...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ZT ရဲ့ ကျားမှတ်ချက်ကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ
ဖတ်ပြီး ပြုံးမိပါတယ်။ ဟ မသွားတာ တော်သေးတာပေါ့။
Actually this was totally made up story.
In ancient maps and records this island was recorded as
Sin-Gapura in Portuguese as long ago.
Due to European merchants used this island as stopover in their spices trading routes by sea to China.
Sin mean China and Gapura mean door or gateway in ancient portuguese.
So (Sin Gapura) is simply mean Gateway to China.
I had stayed and grew up in this island almost half of my age and so shocked to know the truth when I met with professors of South East Asian study in Jakarta.
But understand for them that every country wants to have the glamour history records.
So finally Gateway to China becomes Lion City…. J
Some records show Cin-Gapura (pronounce as Shin Gapura ) and some as Sin - Gapura (some pronounciation).
There are another controversial about Who are the Malay?
And Is Malayarace?
ဟားဟားဟား ရှင်ဟာလေ တော်တော်အားတယ်
နိုင်ငံခြားသားတွေကိုစွဲဆောင်နိုင်ဘို့ မရမက သမိုင်းကို လုပ်ဇတ်လုပ်ထားပါတယ် ဆို ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေစင်္ကပူဝန်ကြီးချုပ်ရော
သူတို ့လောက်တော့ ZT တို ့ကအပျော့လို ့
ဒီပိုစ့်ကို credit မပါပဲ mail ထဲ ရောက်လာလို့ ဖတ်လိုက်ရတယ်... လက်စသတ်တော့ အကိုမူရင်းရေးတာကိုး...